Piktures bụ nnukwu ihe onyonyo maka Android | Gam akporosis
N'oge na-adịbeghị anya anyị hụrụ otu mmelite nke anyị na-echekarị maka Ngwa ngwa onyonyo. Otu n'ime ngwa ndị anyị na ya nọ kemgbe ọtụtụ afọ yana nke ahụ amarala ka esi emegharị n'oge ahụ na usoro nhazi nke Google nyere ma kpoo ihe eji eme ihe na otutu n'ime gi gha ama.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe onyonyo na-ekiri na nwere nnukwu predilection maka kensinammuo interface na oké visual aesthetics, taa ị nwere ike ịbụ chioma, ebe ọ bụ na Piktures nwere omume ọma ndị a niile na-esote ngwa ngwa nke Quickpic yana nhọrọ amamihe ya n'ịhọrọ ihe eji emepụta ihe. Piktures bụ onye na-ekiri ihe oyiyi mara mma nke na-arụ ọrụ nke ọma na site na taa ọ ga-enwe ike ịghọ isi ngwa ịlele foto niile ị na-ese ma ọ bụ ibudata na webụ.
1 Piktures n'ụzọ zuru oke na-anọchi anya ihe Design
2 Akwa ihe onyonyo
Piktures n'ụzọ zuru oke na-anọchi anya ihe Design
Oge ị malitere ngwa ma jiri sekọnd jiri ya, ị ga-achọpụta na ị na-eche ihu a ngwa dị ukwuu iji nwee ike ịhụ onyonyo niile echekwara na ekwentị gam akporo gị.
Gbaso ogige nke Google n'ihe banyere imewe, anyị nwere isi ihuenyo nwere onyogho na-ewe ohere buru ibu nke na-anọchite anya otu n'ime onyonyo ikpeazụ ebudatara ma ọ bụ were, ịchọta n'okpuru ndị ọzọ. N'iji aka ekpe site na aka ekpe, anyị ga-ebido menu menu dị n'akụkụ ebe anyị ga-ahụ folda dị iche iche nke onyonyo iji nwee ike nweta ha, iji nwee ike ịhọrọ akara ngosi pensụl nke anyị chọrọ izobe, otu n'ime atụmatụ ndị ahụ dị mkpa maka ụdị ngwa a.
Na-eme n'akụkụ aka nri ọzọ swipe site na isi ihuenyo, anyị ga-enweta na nzacha ịhụ ihe oyiyi niile na vidiyo ma ọ bụ iche. Ọzọ gị nhọrọ bụ ikike ele oyiyi site na ọnọdụ. Laghachi na ihuenyo mbụ, anyị nwere ike ịhọrọ ọtụtụ onyonyo ịkekọrịta ha ma ọ bụ ọbụlagodi kalenda nke iji lelee onyonyo dịka ụbọchị ewere ma ọ bụ budata.
Site n'ilekwasị anya n'ihe oyiyi anyị nwere ike itinye isi Devid agụghị ndị gbara mmetụta, akuku ya, tinye okpokolo agba ọbụna ịhọrọ ọdịiche ma ọ bụ ọkụ ma ọ bụ tinye nza a na-akpọ obere mbara ala nke ga-eju gị anya na arụmọrụ ya.
Akwa ihe onyonyo
Mmetụta ahụ dị oke mma na Piktures inwe nnukwu interface na-enweghị ụdị lag na ụdị ọrụ niile nwere ike ịchọ ngwa nke ụdị a. Ọ na-adịghị tụkwasịrị na niile ma ndị ọzọ ụzọ gburugburu, ebe ọ bụ na ugbu a ọ ga-etinye gị obi abụọ ma na-eji nke a ngwa ma ọ bụ nke ị na-ejibu eme ihe dika Quickpic n'onwe ya. Nnọọ nnabata maka ezigbo ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Piktures, nnukwu onyonyo mara mma rụpụta